Dadka Kongo ku dhex qaxay baa ka badan kuwa Suuriya ku qaxay - BBC News Somali
Dadka Kongo ku dhex qaxay baa ka badan kuwa Suuriya ku qaxay
Tirada dadka ay colaaddu ku barakicisay gudaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo sannadkii hore ayaa ka badan kuwa ku barakacay Suuriya ama Ciraaq sida ay sheegtay cilmi baaris ay samaysay Hay'adda Arrimaha qaxootiga ee dalka Norway ee magaceeda loo soo gaabiyo NRC.
Colaadda Dalka Kongo waxay dalka gudahiisa ku barakicisay 922,000 oo ruux oo horleh halka ay Suuriya ka ahayd 824,000 Ciraaqna 659,000, sida ay sheegtay NRC.
Tiran ayaa ahayd kuwii ugu badnaa ee colaaddi ay dalkooda ku baro kiciso adduunka oo dhan.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in xasilooni darrada siyaasadeed ee ka jirta Kongo ay sababtay xiisado qoymiyadeed iyo in isku dhacyo dhex maraan kooxaha hubeysan sanadkii hore, gaar ahaanna gobollada waqooyiga iyo koofurta Kivu ee ku yaalla bariga dalkaasi.
3.7 million- oo qof oo ah barakacayaasha laga diwaangeliyay adduunka, in inka badan hal milyan oo ka mid ah waxay ahaayeen kuwo barakacay sanadkan 2017 gudahiisa.
Isku dhacyo hubeysan iyo qalalaase qoymiyadeed oo Congo ka socday muddo 20 sano ah ayaa ku qasbay malaayiin qof inay wajahaan xaalado cunno yari, macluul iyo cudurro.
Bulshada ku nool gobolka Waqooyiga Kivu tusaale ahaan waa kuwo qaba baahiyo badan. Ku dhowaad 373,000 oo qof ayaa gobolkaas ka barakacay.
Jan Egeland - oo ah xoghayaha guud ee NRC oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in malaayiin qof oo dunnida ku nool ay qasab ku noqotay inay guryahooda ka qaxaan sannadkii hore.
NRC ayaa ka walaacsan in howlgalka Qaramada Midoobay ee Congo ee magaciisa loo soo gaabiyo MONUSCO, ay yareynayaan joogitaankooda deegaannada qaar ee dalkaas, iyadoo sheegtay in haatan ay tahay xilliga ugu habboonaa ee looga baahnaaa hay`adaha gargaarku inay ku dadaalaan sidii barakacayaashu ay daryeel u heli lahaayeen.